आज १६औँ लोकतन्त्र दिवस, जनतामा कस्तो छ उत्साह ? – Sadhaiko Khabar
आज १६औँ लोकतन्त्र दिवस, जनतामा कस्तो छ उत्साह ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख ११, २०७९ समय: ८:०१:३८
काठमाडौं / आज १६औँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ । वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आ’न्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनस्र्थापना गर्नुभयो । विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो ।
विसं २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि स’श’स्त्र द्व’न्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आ’न्दोलनरत सात दल र तत्कालीन स’श’स्त्र यु’द्धरत नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारी भयो ।
विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक श’क्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको निर्णायक आ’न्दोलनले चैतमा गति लियो ।
नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए । आ’न्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुर्नस्थापनाकाे घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो ।
विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार क’टौ’ती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्याे । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ ।
संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आ’न्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको प्रवेशद्वार भएकाले वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
यसरी विभिन्न किसिमका राजनीतिक आरोह अवरोहहरु पार गर्दै आजको दिनसम्म आइपुग्दा देशको शासन व्यवस्था र शासकहरू फेरिएपनि देश र जनताको अवस्था उस्तैउस्तै नै रहनुले यो लोकतन्त्र दिवसप्रती सर्वसाधारण जनताको खासै उत्साह भने देखिएको छैन । कुनै न कुनै दिन विकास र समृद्धिको नयाँ अवसर आउला भन्ने कुरामा आशावादी हुँदै प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाएर राख्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ ।